Gbasara anyị - Huaihai Holding Group
Huaihai International Development Corporation dị na Xuzhou Economic Development na Teknụzụ Development Mpaghara (Ọkwa Mba) Huaihai Zongshen Industrial Park.
Huaihai Holding Group, amuru na 1976, agbaala mbọ na nyocha nke teknụzụ na mmepe, n'ichepụta ụgbọ na ọrụ ịzụ ahịa n'ọhịa nke obere ugbo ala na ụgbọala ọhụrụ ike karịa afọ 40, yana nnukwu azụmahịa kpuchie obere ugbo ala, ụgbọala eletriki, ngwa Core. , Azụmahịa mba ọzọ, na ego ọgbara ọhụrụ. Na-ejigide ụdị 3 dị iche iche nke Huaihai, Zongshen na Hoann, Huaihai Holding Group na-arụ ọrụ enyemaka ndị nwere onwe ha 27 na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Xuzhou, Chongqing na ebe ndị ọzọ, yana ntọala esenidụt na Pakistan, India, Chile, Peru, na Indonesia. Onu ahia ndi mmadu na ulo oru ha kariri ijeri RMB iri, ndi no n’etiti ndi isi ulo oru 500 nke China na ndi Top 100 nke ulo oru nke Jiangsu. Ulo ahia ahia nke otu a kpuchitere obodo na mpaghara 85 gburugburu uwa Olu ire ahia ka di n’azu nke mbu n’etu ihe iri n’abu. Ruo na njedebe nke afọ 2019, nrụpụta na ọnụ ahịa ahịa nke obere ụgbọ ala ruru nde 20, nke na-akpọ onwe ya dị ka onye nwere njigide Guinness ụwa na onye isi ụwa na obere ụgbọ ala.
Top 500 nkeonwe ụlọ ọrụ
Top 100 ụlọ ọrụ na Jiangsu Province
Ndị ụlọ ọrụ 3 na-akwụ ụtụ isi na Xuzhou City
Huaihai Holding Group bụ ụlọ ọrụ dị mma na China Mechanical Industry, ụlọ ọrụ nchịkwa ọgbara ọhụrụ na ụlọ ọrụ China, National Self-innovative Enterprise, National Level New & Hi-tech Enterprise, Technical n'onwe Enterprise in Jiangsu, the colors of Jiangsu Quality Award, Excellence Ulo oru nzuzo nke mpaghara Jiangsu; ọ dị n'ime otu narị ụlọ ahịa China nke kacha mma, 100 Jiangsu Provincial Merchants, ụlọ ọrụ 3 kacha elu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Xuzhou, ụlọ ọrụ 3 na-akwụ ụtụ isi na Xuzhou.
Enterlọ ọrụ ahụ agafee asambodo njikwa sistemu nke ISO9001, asambodo njikwa sistemu maka gburugburu ebe obibi ISO14000, asambodo OHSAS18001, asambodo ngwaahịa 3C nke mba, asambodo ọkwa mba na usoro asambodo mba ụwa nakweere ibe ya.